Ivanhoe naWalter Scott. Nhoroondo yekudzidza yenyaya | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waWalter Scott naSir Henry Raeburn.
Taura nezve munyori weScotland Walter scott iri kutaura nezve rimwe remazita makuru eiyo Kudanana muGreat Britain. Iye akapayona iyo genre ye nhoroondo yenhau uye mabasa ake akabudirira kwazvo muEurope yose. Iye anoonekwa semumwe wevanyori vane mukurumbira uye zvinyorwa zvake zvakagadzirwa kuita firimu neterevhizheni kakawanda. Zvaive futi nyanduri nemupepeti. Uye mune edu ekurangarira mazita seizvi akanyorwa Ivanhoe, Quentin duward, Iyo pirate o Rob roy.
Nhasi ndinopora (uye kurerutsa zvishoma) imwe yangu rondedzero yekoreji chaizvo nezve Ivanhoe uye ini ndinosanganisa zvakare zvishuwo zviviri senge zvinyorwa uye nhoroondo. Ino nguva yaive yenyaya yeNhoroondo uye yaive 1991, iyo inonzi nekukurumidza. Ikoko kunoenda.
2 NZVIMBO NEZVINHU ZVAKAITIKA
2.1 1. MaNormans nemaSaxon
2.2 2. Hondo dzehondo
2.3 3. Hama dzaPlantagenet
2.4 4. MaJuda kuMiddle Ages
3 MAUMBIRWO ENHOROONDO UYE MAITIRO
4 VANHU VENYANZVI
Iyi ndiyo yekutanga novel inoverengeka umo Scott akaedza a kunyanya chinyorwa cheChirungu. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kunyangwe mukati mekunyepedzera kwekupa munhu wenhoroondo kubasa, iye munyori anozvibvuma kuti atora chokwadi rusununguko Mupfungwa iyoyo (musanganiswa wevanyori uye vengano). Izvi zvinoratidzwa mukuvengana pakati pevaSaxon nemaNormans panguva iri kutaurwa, pamwe nezvimwe ruzivo rwezvakatipoteredza. Izvi hazvideredze kukosha kweruzivo, asi asi Kurondedzera kwaScott kururamisa kunovimbisa kufarira kwevadzidzi.
Zvichida mavara anokwezva ndeaya anongofungidzirwa akafanana Ivanhoe, mudiwa wake Mukadzi rowena kana muHebheru akanaka Rebecca, mwanasikana wa Isaac weYork. Naivowo Friar Tuck, jovial uye murwi, kana Wamba, jester akatendeka uye akazvipira we Cedric iyo Saxon, Baba vaIvanhoe. Uye pedyo navo kuoneka vatambi vanozivikanwa kufanana neanozivikanwa Robin Hood uye reales semadzimambo nehama Richard the Lionheart naJuan Sin Tierra, iyo inobatsira kuwedzera kufarira kweruzivo.
NZVIMBO NEZVINHU ZVAKAITIKA
Mutambo wakaiswa mu XII remakore muEngland pasi pekutonga kwaRichard the Lionheart nezvipo madingindira mana akakosha kutaura zvakaitika.
1.NOrmans uye Saxons
Tichireva iyo kurwa pakati paNormans nemaSaxon, kukakavara kunoratidzika kuchiratidzika kubva pakutanga kwekupinda kwekutanga munyika yeiyo yekupedzisira, kuchimanikidza rumwe rudzi rwehupenyu, mutauro wakasiyana netsika. Muenzaniso wakajeka wekupikisa uku kutonga kunoonekwa mune hunhu hwe Cedric iyo Saxon pamberi changamire Brian deBois-Guilbert.
Izvi hazviitike ne mambo Richard izvo, kunyangwe zviripo Norman, nakidzwa nekuyemura yevaanotonga nekutora chikamu kwavo muHondo dzeHondo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa, zvisinei, iyo mythification yamambo uyu uyo ​​munhoroondo haana kutamba danho rekusarudza uye yakanga isina kunyanya kunaka kuEngland.
2. Hondo dzehondo
Kubatana neizvi, isu tinofanirwa kufunga nezvenyaya ye Hondo dzehondo, sezvo kuwedzera kwaMambo Richard, vatambi vaviri vekunyepedzera vakapindawo mazviri: protagonist, Ivanhoe uye Knights Templar senge zvambotaurwa Bois-Guilbert. Uye vese zvavo vanodzoka sevafambi kubva kuNyika Tsvene. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti Hondo dzehondo dzakatangira kubva pakakwirira kwenzendo dzekuenda kuJerusarema, kunyanya kuVanhu Vatsvene.
3. Hama dzaPlantagenet
Imwe nyaya irikureva makwikwi pakati paJuan Sin Tierra nemukoma wake Ricardo. Nekudaro, sekureva kwenhoroondo, Ricardo Ini, mwanakomana waEnrique II Plantagenet naEleanor weAkitaine, vakamutsiva pachigaro mushure mekumutarisana. Pano anomiririrwa saiye Nhema nhema, iyo isina kuziviswa kusvika kumagumo, paanobatana ne protagonist neshamwari dzake kunosangana nemukoma wake Juan.
Pepa re John Pasina Nyika mungano iri iyo yeiyo anotora kodzero yaMambo Richard, chokwadi chatinoonga mukunetseka kwake pamusoro pekutyisidzira kwakaunzwa naIvanhoe, nekuti akarwa pamwe naRicardo muHondo dzeChikristu.
4. MaJuda kuMiddle Ages
Hunhu hwe Isaac weYork ndiye mumiriri weboka rakadai rakakosha uye rinozivikanwa rezvemagariro senge reiyo MaJuda nebasa ravo munharaunda yepakati nepakati, sezvo iri dhorobha rakatambudzwa mukati meMiddle Ages nekuda kwezvehupfumi nezvinamato. Muchokwadi, tinosangana naIsaac weYork, akaendeswa kunzvimbo isina basa kuCedric tafura yeSaxon kutanga kwenyaya nevafambi vachiuya naye uye nevashandi.
Zvisinei, simba rako rezvemari uye hupfumi zvinokutendera kuti uve nechimwe chinzvimbo munharaunda uye zvakare inoshanda nevanhu vane mukurumbira kana kuita zvikwereti. Muenzaniso wakajeka chiitiko che mutambo wekutanga izvo zvinoitika uye nekwaunogona kuzviona pedyo naJuan Sin Tierra neboka rake. Zvakare paanopa Ivanhoe chikwereti yekutora nhumbi dzake dzokurwa nebhiza rake kuti vatore chikamu mazviri.
Zvese izvi zvinoratidza iyo mamiriro ezvinhu enhoroondo yenguva ino maererano nekirasi iyi yemagariro pamwe nehumambo munyaya dzehupfumi, idzo dzavakawana nadzo kupokana kwevanhu.
MAUMBIRWO ENHOROONDO UYE MAITIRO
Ndatodaidza Mambo Richard nemunin'ina wake John, iyo nzanga makirasi yenoveli ino, anomiririra zvakanyanya eMiddle Ages ndiwo vanababa nevanhuwo zvavo.
ari vanababa pano ivo vanotamba chinzvimbo chakakodzera zvakanyanya kupfuura pachokwadi, vachiratidza huwandu hwevanhu. Semuenzaniso, isu tine Ivanhoe. Haasi munhu anoshingairira, asi ane hunhu mumabasa ake uye maitiro akadai sekushivirira chitendero kurapwa kwaanogamuchira kubva kuna Isaac de York nemwanasikana wake uye izvo Ivanhoe anozvitenda pasina rusaruro. Isuwo tine yako chido chekuyananisa nababa vake, kunyange achigara achinyumwa uye ari kure. Uye zvechokwadi pane yako ushingi muhondo, kutanga mumaKrisadhe uyezve munyika yake vachirwisa vapambi vehumambo.
El vanhuwo zvavo, murimi uye serfdom yaizoenzanisirwa ne Wamba, anogara akavimbika kuna ishe wake Cedric uye gare gare kuna Ivanhoe. Uye zvakare ne Gurth, iyo jester mudunhu reSaxon. Ose ari maviri anomiririra hukama hwakawanda hwehukama hwe nzvimbo pakati p ishe nevaranda vake. Uyewo ivo vari muenzaniso wakajeka weyakajairika kupokana kwevanhu kune anopinda.
Ivo ndivo vazhinji uye Scott anozvishandisa kushanda chaikoiko nezviitiko zvekufungidzira izvo panguva imwechete zvinowedzera icho chokwadi..
Ivanhoe ndiye mumwe fambisa chiito, kunyangwe zviitiko uye nharaunda zvinomukomberedza zviri izvo mamiriro ezvinhu zviito zvake.
Mukadzi rowena hunhu hwechikadzi passiv neko kwe Rebecca zvimwe zvakawanda kushanda. Pano zvakafanira kuratidza basa revakadzi, nekuti Rowena ndiye akajairika mukadzi wepakati nepakati apo Rebecca ari munhu akazvipira murungano. Pasina kuenda kumberi, ndiyo chinangwa chezviitiko zvakaita sekurwa kwekupedzisira kwaIvanhoe nekumununura kubva mukutongwa Chii chinoitwa kwaari nekupomerwa kuti muroyi.
Cedric iyo Saxon ndiyo feudal ishe par kugona, kuwedzera kune munhu anofarira kugamuchira vaenzi, ane hasha, ane pfungwa dzakagadziriswa uye yakasimba nyika.
Uye zvinongoramba zvichiona kuvepo kwe Robin WashingtonKunyangwe iri yekunyepedzera kana kwete, kukosha kwayo kwakakodzera. Hushamwari hwake naIvanhoe neBlack Knight ichava zvakakosha kurwisa vanobvuta uye kutorazve chigaro chamambo wavo. Izvi, kana zvaziviswa, zvinodzosera ropafadzo dzayo dzekugara dzakatendeka kumisimboti yayo.
Walter Scott anokwanisa kumutsa nebasa iri iyo kufarira kweruzhinji nhoroondo yezvinyorwa zvemhando mune iyo fungidziro yake inoshandisa zviwanikwa zvedzidzo yekutsvagisa, ichizadzisa nematarenda ake semutauri wenyaya. Iyo inokwanisa kuratidza izvo zvakaitika chaizvo zvakatendeka kunyangwe ichitaura yekufungidzira nyaya, asi yakanyatsogadzirwa uye yakabatana, kuitira kuti kugona kwayo kuve nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ivanhoe naWalter Scott. Nhoroondo yekudzidza yenoverengeka